Akụkọ - Kedu ebe dị mfe iji mụọ Chinese karịa asụsụ ndị ọzọ?
+ 1 209 763 8854 (United States)
Kedu ebe dị mfe iji mụọ asụsụ Chinese karịa asụsụ ndị ọzọ?
Ọtụtụ ndị na-ekwu na ịmụ asụsụ Chinese siri ike. N'ezie, ọ bụghị. Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na mkpụrụedemede ndị China chọrọ ọzụzụ nke iburu ihe n'isi, asụsụ China dịkwa mfe ma e jiri ya tụnyere asụsụ ndị ọzọ.
Chinese Pinyin dị nkenke ma doo anya, edere na mkpụrụedemede Latin, ọnụọgụ ahụ pere mpe. Mgbe mụtara 21 mkpịrịsị edemede na 38 finals gbakwunye na 4-aj u, ọ na-ekpuchi fọrọ nke nta niile na-akpọ okwu.
Onweghi mgbanwe mgbanwe mofo na Chinese. Iji maa atụ, e kewara aha ndị nọ na Russia ịbụ nwoke, nwanyị, na nnọpụiche. Aha obula nwere uzo abuo, uzo na otutu, enwekwara uzo isii di iche na otu na otutu, ya mere oge ufodu aha okwu nwere uzo iri na abuo Kedu maka mgbanwe a? Malitela inwe ọmịiko maka ụmụ akwụkwọ na-amụ asụsụ Russian? Ọ bụghị naanị na Russian, kamakwa na aha French na German, enweghị mgbanwe dị otú ahụ n'asụsụ Chinese.
Ngosipụta nke ọnụ ọgụgụ na ọtụtụ nọmba na Chinese dịtụ mfe. Na mgbakwunye na ịtinye "ndị nwoke" na nnochi aha nke onwe, n'ozuzu ọ dịghị mkpa iji mesie echiche nke ọtụtụ ọnụọgụ ike, ma tụkwasịkwuo obi na ntụgharị n'efu.
Usoro iwu nke Chinese dị ezigbo mkpa ma dịkwa obere. Enweghị ọdịiche nke "nke ikpe ahụ", mana n'ọtụtụ asụsụ, enwere ọtụtụ mgbanwe na "nke ikpe", yana enwekwara adjective na-agbanwe ya. Ọtụtụ asụsụ na Chinese Kama nke ahụ, iwu ahụ adịghị mkpa.
Chinese dị iche na asụsụ ndị ọzọ na “ngalaba ụtọasụsụ”. Nke a bụkwa ebe kachasị lekwasị anya ebe Chinese dị mfe ịmụ!
Ekwentị: + 1 209 763 8854 (United States)
Ekwentị: +86 17365836697 （China）